Jacaylka Tooska ah, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Jacaylka Ilaah waa nacasnimo. Aniga qudhayda ayaan bayaankan dhigaa, laakiin rasuul Bawlos. Waraaq uu u diray kaniisadda Korintos, ayuu Bawlos ku qoray inuusan u imaan inuu calaamad u siiyo Yuhuudda ama xigmadda Gariigta, laakiin inuu ku wacdiyo Ciise iskutallaabta lagu qodbay. "Laakiin waxaan ku wacdinnaa Masiixa, kan iskutallaabta lagu qodbay, Yuhuudda xanaaq iyo nacasnimo aan Yuhuudda ahayn" (1 Korintos 1,23:XNUMX).
Marka loo eego aragtida aadanaha, jacaylka Ilaah micno ma samaynayo. Maxaa yeelay hadalka ayaa iskutallaabta ka imanaya. Qaar waa nacasnimo, kuwa kalena waa nacasnimo farshaxanimo casri ah kuwa lumaya ”(1 Korintos 1,18:XNUMX). Kuwa aan garanaynin in erayga iskutallaabtu uu yahay erayga jacaylka Ilaah, waa nacasnimo in la rumeeysto in Ilaah na badbaadiyey dhimashadiisa. Jacaylka Ilaah runti wuxuu umuuqdaa mid aan la fahmi karin, iswaafaqsaneyn, nacas ah, oo xagjir ah.
Ammaanta ilaa wasakhda
Qiyaas inaad ku nooshahay si kaamil ah. Iyagu waa astaanta midnimada iyo xiriirka Eebbe. Noloshaadu waa muujinta jacaylka, farxadda iyo nabadda oo aad go aansato inaad si xagjir ah u beddesho.
Waxaan hadda sharaxay bilowga abuuris markii Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ahi ay ku wada noolaadeen wada noolaansho iyo wada jir buuxa. Iyagu waa ruux, himilo iyo xamaasad iyo jiritaankooda jiritaankoodana waxaa lagu muujiyaa jacayl, farxad iyo nabad.
Ka dib waxay go'aansadaan inay ballaariyaan beeshooda iyagoo la wadaagaya waxay yihiin qof aan weli jirin. Markaa bay abuuraan bini-aadamka oo waxay ugu yeedhaan carruurta Ilaah. Ragga iyo dumarka, adiga iyo aniga, si aan xiriir u yeelan karno weligeen. Si kastaba ha noqotee, waxay noogu abuureen hal god. Ma aysan dooneynin inay go'aamiyaan sida aan u dhaqanno si aan xiriir ula yeelan karno isaga, laakiin waxay rabeen inaan dooranno xiriirkaas iyaga. Taasina waa sababta ay na siisay damacyadooda gaarka ah si aan nafteena u go'aansanno inaan xiriir la lahaanno iyaga. Sababtoo ah waxay na siiyeen doorashadan, waxay ogaayeen in dadka intooda badani go'aan xun gaarayaan. Taasi waa sababta ay qorshe u sameeyeen. Maahan qorshe B, laakiin waa qorshe. Qorshahan ayaa ah in Wiilka Ilaah uu noqdo bini aadam iyo in Wiilka Ilaah uu u dhinto bini-aadamka iskutallaabta dusheeda. Dadka intooda ugu badan, tani waa nacasnimo. Waa jacayl xagjir ah.
Waxaan dhawaan booqday wadan Aasiya ku yaal halkaas oo dadku ku caabudaan boqolaal ilaahyo. Rumaystayaashu waxay noloshooda oo dhan ku dhammaystiraan hubinta inay ilaahyadan ku jiraan niyad wanaagsan. Waxay ku dadaalaan inay ilaahyadan ku hayaan xaalad wanaagsan si aan loo habaarin. Waxay ku qaataan noloshooda oo dhan iyagoo ka baqaya inaysan fiicnayn. Fikradda ah in mid ka mid ah ilaahyadooda ay noqdaan dad isla markaana ka caawin doona jacaylkooda jacaylku waa fikir nacasnimo ah iyaga.
Laakiin Ilaah sinaba uma tixgeliyo fikrad nacas ah. Go'aankiisa wuxuu ku saleysan yahay jacayl, maxaa yeelay isagu aad buu noo jecel yahay oo sharaftiisii ​​wuu ka tegey oo wuxuu noqday nin dhalinyaro ah, nin Yuhuudi ah: “Ereyguna jidh buu noqday oo dhexdeenna ayuu ku dhex joogay” (Yooxanaa 1,14:XNUMX). Waxay u muuqataa in dabeecadda noocaas ah ee xagga Ilaah ka timid ay tahay nacasnimo. Waa jacayl xagjir ah.
Bini’aadamka ahaan, Eebbe wuxuu la noolaa kalluumeysatada iyo cashuur-bixiyeyaasha, dadka caadiga ah iyo kuwa laga saaray bulshada. Waqti buu la qaatay dadka baraska leh, iyo jinniyo qaba iyo dembilayaasha. Culimada diinta waxay ugu yeeri jireen nacas. Waa jacayl xagjir ah.
Cutubka sideedaad ee Injiilka Yooxanaa wuxuu sheegayaa sheekada haweeney lagu qabtay qish oo la hor keenay Ciise. Culimada diinta waxay rabeen in dhagxaan lagu dilo, laakiin ciise wuxuu yidhi kan aan eed lahayn waa inuu tuuraa dhagaxa ugu horeeya. Kooxdii dadkii isugu soo baxay goobtii ayaa la waayey, Ciisena oo ah qofka kaliya ee runtii xor ka ahaa dambiga, ayaa u sheegay in uusan xukumi doonin iyada oo ay u sheegtay inuusan mar dambe dembaabin. Akhlaaqdaani waa doqon dad badan. Waa jacayl xagjir ah.
Ciise wuxuu martigeliyey dembilayaal guriga ku jiray. Culimada diinta ayaa sheegay in ay nacas tahay in lala fadhiisto dadka dambiile ah maxaa yeelay isagu ma ahaan doono qof nadiif ah oo nadiif ah. Dembiyadaadu way saami ku yeelan doonaan isaga wuuna noqon doonaa sidaada oo kale. Laakiin jacaylka xagjirka ah ayaa ka soo horjeedda aragtidan. Ciise, oo ah Wiilka Ilaah iyo Wiilka Aadanaha isla waqtigaas, ayaa u oggolaaday in la qabto, la jirdilo, oo la dilo si aan dib ugu cusbooneysiinno dhiiggiisa daatay, waa la cafiyey iyo nolosheena oo aan la heshiinno Ilaah. Wuxuu qaatay dhammaan wasakhdeenna iyo nacasnimadeenna oo wuxuu nadiifiyay Aabbahayaga jannada hortooda. Waa jacayl xagjir ah.
Isaga waa la aasay oo laga sara kiciyey kuwii dhintay maalintii saddexaad si aynu u helno cafis, cusbooneysiin iyo midnimo isaga, nolol buuxda oo ku filan. Wuxuu xertiisii ​​ku yidhi: Maalintaas waxaad garan doontaan inaan anigu aabbahay ku jiro, idinna aad igu jirtaan, anna aan idinku jiro. Taasi waxay umuuqataa hadal hadal nacas ah, laakiin waa jacayl xagjir ah, nolol xagjir ah. Oo markuu jannada kor u degay, maxaa yeelay, isagu waa Ilaah naxariis badan oo na jecel jacaylkiisa weyn, oo weliba annagoo dembiyadeenna ku dhintay, oo haddana Masiixa la noolaaday, nimco baad ku badbaaddeen. -; Oo isagu wuxuu inala sara kiciyey oo jannada ina koriyey xagga Ciise Masiix ”(Efesos 14,20: 2,4-6).
Markii aan dembiilayaal ahayn - ka hor intaanan awoodin inaan garowno oo ka toobadkeenno dembiyadeenna - Ilaah waa ina aqbalay oo wuu ina jeclaa.
Waa jacayl xagjir ah. Ciise, oo ah Wiilka Ilaah, waxaan qayb ka nahay jacaylka rabaani ah. Ilaaha ah Aabbaha ayaa ina saaray dhinac Ciise oo wuxuu nagu casuumay inaan qayb ka qaadano wuxuu sameeyo. Wuxuu nagu dhiirrigelinayaa inaan wadaagno jacaylkan xag-jirka ah iyo noloshan xag-jirka ah ee Ciise uu xilsaaro oo aan isaga ugu hoggaansanno dadka kale. Qorshaha Eebbe waa nacasnimo kuwa badan. Waa qorshe muujinaya jacayl xag-jir ah.
Addeecista xag-jirka ah
Tarjumaadda Nolosha Cusub (Baybalka) waxay ku leedahay kuwan soo socda: “Midba midka kale ula dhaqmo sidii Masiixu idiin baray. In kasta oo uu Ilaah ahaa, haddana kuma uusan adkayn xuquuqdiisa rabbaaniga ah. Wax walba wuu iska daayay; wuxuu qaatay booska hoose ee addoonka oo wuxuu ku dhashay sidii bini aadam oo loo aqoonsan yahay sidan oo kale. Isagu is-hoosaysiiyay oo addeecay dhimashada ilaa uu iskutallaabta dusheeda ugu dhinto sidii nin dambiile ah. Oo sidaas daraaddeed ayaa Ilaah isagii samada kor ugu qaaday, oo wuxuu isaga siiyey magac ka sarreeya magacyada kale oo dhan. Inta jannada ku jirta iyo waxyaalaha dhulka jooga iyo waxyaalaha dhulka ka hooseeya oo dhanba magacan ha u foororsadeen. Iyo ammaanta Ilaaha Aabbaha ah, qof walbana wuu qirayaa in Ciise Masiix yahay Sayidku (Filiboy 2,5-11). Waa jacayl xagjir ah.
Ciise wuxuu u dhintay aadanaha oo dhan sababtoo ah jacayl u muuqda doqon. Wuxuu nagu casuumay inaan wadaagno jacaylkaan, oo mararka qaar uma eka inay macno samaynayaan, laakiin wuxuu ka caawiyaa kuwa kale inay fahmaan jacaylka Eebbe. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku siiyo tusaale ah jacaylkan xag-jirka ah. Waxaan ku leennahay saaxiib saaxiib wadaad ah oo jooga Nepal: Deben Sam. Ku dhawaad ​​usbuuc kasta adeegga kadib, Deben wuxuu aada tuulada, halkaas oo ay ku taal xarun caafimaad oo loogu talagalay saboolka saboolka ah ee Kathmandu halkaas oo lagu daaweeyo lacag la’aan. Deben wuxuu u dhisay mashruuc beero u dhaw bulshada iyo agoonta, oo halkan buu ku wacdiyaa injiilka. Deben ayaa dhowaan lagu weerarey jidka, isagoo si xun loo garaacay laguna eedeeyay inuu rajo been ah u keenay dadka tuulada. Waxaa lagu eedeeyay inuu sababay wasakheyn diimeed - hadaladiisa ayaa doqon u ahaa kuwa aan aqoonta wanaagsan u lahayn iskutallaabta.
Deben, oo isagu hore uga soo kabsaday weerarkan, ayaa dadka u jecel qaab xagjir ah isaga oo uga sheegaya jacaylka uu Eebbe ina weydiisto in aan la wadaagno qof kasta, xitaa cadaawayaasheena. Sidan ayaan nafteenna ugu dhiibnaa nolosha kuwa kale.
Wadaagista warka wanaagsan ee iskutallaabta sidoo kale waxaa ka mid ah wadaagida waayo-aragnimada in jacaylkaan Ciise Masiix uu yahay mid xagjir ah oo is beddelaya. Masiixiyaddu waxay salka ku haysaa jacaylka noloshan sii siinaya ee Ciise iyo kuwa raacsan. Waa jacayl nacas ah oo mararka qaar macno samaynaya aragtida aadanaha. Waa jacayl aynaan ku qabsan karin maskaxdeena, laakiin qalbigayaga keliya. Waa jacayl xagjir ah.
Ciidda Masiixiga wuxuu ku saabsan yahay jacaylka aabbaha u leeyahay dhammaan carruurtiisa, xitaa kuwa aan ogayn inay yihiin carruurtii Ilaah. Aabuhu wuxuu siiyay wiilkiisii. Wiilki wuxuu naftiisa siiyay. Wuxuu u dhintay dadka oo dhan. Wuxuu dadka oo dhan uga sara kacay nolosha dhabta ah. Jacaylkiisu wuxuu u jiraa dadka oo dhan - kuwa yaqaan isaga iyo kuwa aan weli isaga aqoon weli. Waa jacayl xagjir ah.
waxaa qoray Rick Schallenberger